I-China eya e-United States-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Inkomba Yezinsizakalo>I-North American Iine>China ukuya e-United States
Kuthunyelwa kusuka eChina kuya e-USA
Iningi lamakhasimende ethu lizinze e-USA, ngakho-ke sekuyimakethe ebaluleke kakhulu kithi. Sisayine amanani enkontileka nabaphathi abanjengeCOSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, ne-HMM. Lobu budlelwano asivumele sikunikeze ngamanani entengo amahle kakhulu lapho uhanjiswa usuka eChina uye kunoma yiliphi itheku e-USA.
Nge-SHL njengabalingani, ukuthumela izimpahla ezivela eChina kuya e-USA kuzoba lula kakhulu, uzodinga kuphela ukushiya izimpahla zakho nathi, futhi siyokwenza okunye. I-SHL ihlose ukuba phambili phambili kwezimpahla zakho ukusuka eChina kuya e-USA. Cela isilinganiso esihle manje.
Ukuthumela ngeRo-Ro / Break Bulk kusuka eChina kuya e-US
I-SHL inganikeza i-RORO ROROMAFI BREAKBULK ngemishini enembile, izimoto nemishini esindayo kusuka e-China kuye e-US Singanikeza izixazululo zokuma kanye nezinkinga ezihambelana nazo.
Ukuthunyelwa Kwasolwandle Kokuhambisa Olwandle kusuka eChina kuya e-USA
Ukuhanjiswa Kwempahla Yomoya kusuka eChina kuya e-USA
Ukuhamba Eshibhile Kakhulu kusuka eChina kuya e-US
Lokhu kuya ngokuthi zingaki izimpahla ozithumela zisuka eChina ziye e-US, uma ungasheshi ngesampula elincane kakhulu, ungasebenzisa i-China Post noma uveze njenge-DHL, uma unezimpahla eziningi, bese uthinta iBansar, uzothola ukuthunyelwa kwethu okuhle kakhulu isilinganiso kusuka eChina ukuya e-US.
Kuthunyelwa Isikhathi Esingakanani / Okungakanani kusuka eChina kuya e-US
Door to Door Shipping kusuka eChina kuya e-USA
Umthumeli Wakho Ohamba phambili Oqhamuka EChina Aya E-USA
Nikeza ngamanani olwandle ancintisanayo nolwandle kusuka eChina kuya e-USA.
Ukuze Seaport e-USA
Izikhumulo Sezindiza Eziyinhloko e-USA
Kunezikhumulo zezindiza eziningana e-USA ezithola imithwalo evela eChina.
Kulesi sihloko, sizohlanganisa kuphela izi-10 zezindawo zezindiza ezinkulu kakhulu nezixakeke kakhulu.
Ngicela uqaphele; lezi zikhumulo zezindiza ziphakama phezulu maqondana nezakhiwo zezimpahla, ingqalasizinda kanye namakhono okubamba.
Ngokuvamile, ziyizikhumulo zezindiza ezizokuqinisekisa ukunakekelwa okuhle kokungenisa kwakho.
IMemphis International Airport iyisikhumulo sezindiza esixakeke kakhulu emhlabeni maqondana nokuhamba kwemithwalo.
Empeleni, ngonyaka ka-2015 kuphela, isikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele saseMemphis sisingatha amathani wempahla abalelwa ezigidini ezingama-4.29.
Qaphela ukuthi isikhumulo sezindiza sigcwele ujantshi, umgwaqo, abaleke, nomfula okuvumela ukuhamba okulula kwezimpahla ukuya nokubuya esikhumulweni sezindiza.
Isikhumulo sezindiza i-Anchorage sise-Alaska.
Yisikhumulo sezindiza esisodwa esiphatha izimpahla eziningi ezithunyelwa ngePacific ziye e-US.
Kufanele wazi ukuthi lesi sikhumulo sezindiza sinezinhlelo zemigwaqo ezinqunyelwe.
Eqinisweni, imiphakathi eminingi esifundeni sase-Alaska itholakala kude nenethiwekhi yomgwaqo.
Ngakho-ke, noma yikuphi ukuthunyelwa okuya e-US ngesikhumulo sezindiza kufanele kuthunyelwe ngendiza encane kumiphakathi e-Alaska.
Isikhumulo sezindiza iLouisville International Airport, iKentucky ngesinye sezikhumulo sezindiza esidumile emhlabeni futhi singesinye sezindawo ezinkulu kunazo zonke nezikhuluphele e-US.
Isikhumulo sezindiza njengoba ngonyaka ka-2015 besiphathe ngaphezulu kwamaphawundi ezigidi ezinhlanu zemithwalo yezimpahla zombili zezimpahla neposi.
I-Cargo tonnage ngonyaka we-2015 kuphela emi kumathani ayizigidi eziyi-2.3.
Ngokwesikhathi sezakhiwo kanye nengqalasizinda, isikhumulo sezindiza saseLouisville yisikhungo esikhulu kunazo zonke esiphatha izimpahla ezithwala imishini emhlabeni jikelele.
Isikhumulo sezindiza sinezinhlelo zokwenza i-IT ezivumela ukuthi izimpahla zisuswe futhi zisatshalaliswe ngokushesha okukhulu.
I-4 Los Angeles
Isikhumulo sezindiza i-Los Angeles International Airport kwesinye isikhathi sibizwa nge-LAX ngokuya ngamakhodi we-IATA.
Kuyisikhumulo sezindiza esikhulu esisebenzela eLos Angeles nendawo ezungeze iCalifornia, e-USA.
Qaphela ukuthi i-LAX yisikhumulo sezindiza esiphithizelayo sobabili kwabagibeli nabathwali bezimpahla.
Yabizwa ngokuthi yisikhumulo sezindiza okuxakeke kakhulu emhlabeni ngo-6 nesesine esixakeke kakhulu ngo-2010.
Isikhumulo sezindiza sitholakala eningizimu-ntshonalanga yedolobha laseWestchester elingamakhilomitha ayi-18 ukusuka edolobheni le-LA.
Isikhumulo sezindiza saseMiami International sithathwa njengesinye sezindiza ezixakeke kakhulu emhlabeni.
Isikhumulo sezindiza singaphansi komnyango wezindiza eMiami.
Umzimba ofanayo nawo uyasebenza.
Ngokwemibiko, lesi sikhumulo sezindiza sithwala iningi lezimpahla zakwamanye amazwe zaseMelika ezivela ezifundeni emhlabeni wonke.
Izindiza ezinkulu ezingaphezu kuka-90 ezithwala izimpahla zisebenza izindiza zansuku zonke phakathi kwesikhumulo sezindiza saseMiami kanye nezinye izikhumulo zezindiza emhlabeni.
Lokhu kufaka phakathi; Izindiza zase-Asiana, i-Cargolux, i-FedEx expression, izindiza zaseChina phakathi kwabanye abaningi.
Njengamanje, izindiza ezisebenza eChicago International Airport yiChina China, China Airlines ne China cargo.
Ezinye izindiza ezisebenzela isikhumulo sezindiza i-Air China, Cargolux, i-Eva air, QANTAS, neYangtze River Express.
Zonke lezi zinkampani zezindiza zinezinsizakalo ezigcwele zokungenisa / ukuthunyelwa kwamanye amazwe ezivela nokubuya eChina.
Isikhumulo sezindiza saseChicago saziwa nangokuthi isikhumulo sezindiza emhlabeni wonke i-O'Hare, ngakho-ke ungadideki lapho uhlangabezana nalokhu.
7. INew York (JFK)
Isikhumulo sezindiza i-JF Kennedy International njengoba saziwa njalo sitholakala esifundeni saseQueens, eNew York.
Kuyinto enkulu kunazo zonke zezindiza ezinkulu ezintathu zamazwe omhlaba ezihlanganisa uhlelo lwezindiza lwedolobha laseNew York.
Lesi sikhumulo sezindiza siyaphawula ngamamayela ayi-16 ukusuka maphakathi nedolobha laseManhattan.
Isikhumulo sezindiza i-JFK yisango lesithathu elihamba phambili lokuthwala izimpahla eliya e-USA nelokuqala 3 kwezokuhamba ngezindiza emhlabeni jikelele.
Cishe izindiza ezi-100 ezahlukahlukene zisebenza ngaphandle kweJFK International.
Lokhu kufaka phakathi; I-Asia, i-Air China, i-Eva, iCargolux, iCathay Pacific, iNippon, i-Emirates, i-FedEx, i-DHL, i-UPS nezinye eziningi.
I-Indianapolis International Airport iyisikhumulo sezindiza somphakathi esiphathwe futhi esisebenza ngegunya lesikhumulo sezindiza i-Indiana polis.
Isikhumulo sezindiza siyikhaya lesiFedEx lesibili ngobukhulu ngemuva kwalesi esisesikhumulweni sezindiza emhlabeni wonke saseMemphis.
Njengoba ithathe indawo eyomile engama-3116, isikhumulo sezindiza i-Indiana polis siyisikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke esifundazweni sase-Indiana.
I-Atlanta International Airport itholakala eGeorgia, e-Atlanta USA.
Kungukukalwa kwesikhumulo sezindiza sebhizinisi emhlabeni wonke.
Isikhumulo sezindiza siyisikhungo esikhulu saseningizimu ye-US kulo lonke izwe.
Izindiza eziningi zokuxhuma nezamazwe ngamazwe zihamba nge-ATL ngaphambi kokuya lapho ziya khona ekugcineni.
Kusebenza njengesango elikhulu lezindiza zamazwe aphesheya ezivela e-Asia nakwezinye izifunda emhlabeni jikelele.
Lesi sikhumulo sezindiza siphakathi kwedolobha laseDallas nelaseFort Worth, eTexas.
Isikhumulo sezindiza sibhekwa njengendawo ebaluleke kakhulu yendiza esifundeni sonke saseDallas.
Kubuye kube yisikhumulo sezindiza esixakeke kakhulu emhlabeni lapho ucubungula umsebenzi wezindiza.
Ngokuphathelene nosayizi, i-DFW inamahabhu e-terminal enkulu yezindiza e-USA (ngemuva kweDenver International).
Iwebhusayithi ye-CBP https://www.cbp.gov/ inolwazi oluningi maqondana namasiko nomsebenzi wase-US.